Macluumaadka Shirkadda - Dongguan Enuo Mold Co., Ltd.
Dongguan Enuo Mold Co., Ltd. waa shirkad hoosaad ka ah kooxda Hong Kong BHD Group, ganacsiga aasaasiga ahi waa naqshadda caaryada iyo soosaarista. Intaa waxaa sii dheer, Enuo Mold waa warshad OEM ah oo ku hawlan qaybo bir ah oo ka kooban makiinadaha CNC, alaabada noocooda ah R & D, qalabka baaritaanka / Qalabka R & D, alaabada caaga ah ee wax lagu duubo, ku buufinta iyo isku imaatinka.
Shirkadda waxay ku guuleysatay dib u dejinta dhirta cusub bishii Abriil 2017, oo leh aag 2,000 mitir laba jibbaaran ah, waa seddex koox oo isku dhaf ah oo ku yaal aqoon isweydaarsi waxayna kuxiran yihiin xarumaha saxda ah ee CNC, mashiinnada EDM, mashiinnada wax lagu shiido, mashiinnada wax lagu shiido, tijaabinta iyo qalabka kale oo gebi ahaanba ka sii badan. ka badan 30 nooc. Culeyska wiishka ugu badan ee wiishku waa 15 tan. Wax soosaarka sanadlaha ah wuxuu ka sarreeyaa 100 nooc oo wasakhda ugu weyn ee aan sameynayna waa illaa 30 Tan. Marka loo barbardhigo suuqa caaryada, tartanka aasaasiga ah ee shirkadda wuxuu ka yimaadaa kooxda injineernimada iyo wax soo saarka khibradda leh. Xubnaha maareynta aasaasiga ah ee mashruuca, naqshadeynta iyo soo saarista dhamaantood waxay leeyihiin in kabadan 10 sano oo khibrad shaqo oo la taaban karo ah iyo khibrad maamul waaxeed, Sidaa darteed, waxay si fiican u baran karaan isuduwidda kheyraadka si loo xaliyo labada dhibic ee xanuunka weyn ee warshadda-tayada iyo waqtiga ugu dambeeya . Kooxda naqshadeynta waxay si toos ah ugu lug lahaayeen naqshadeynta caaryada Marelli AL / Magna / Valeo auto auto; Mahle-Behr haanta & biyaha haanta otomaatiga iyo qeybta qaboojiyaha taageere; Qaybaha gawaarida qorraxda ee Inalfa; Qalabka HCM ee gudaha iyo dibedda; INTEC / ARMADA (Nissan) qeybaha dhismaha auto iyo LEIFHEIT qaybaha guriga. Kooxda mashruuca waxay si toos ah u hogaamisay wasakhda horumarinta CK / Mahle-Behr / Valeo hawo & hawo hawo iyo biyo qaboojiye iyo qayb hawo qaboojiye ah; Sogefi iridda iyo tubooyinka, Sinocene / Toyota synthetic gudaha iyo dibedda qaybaha qaabdhismeedka, EATON qaybaha haanta shidaalka, qalabka korontada ee ABB iyo IKEA wax soo saarka guryaha. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay sameysay isbahaysi horumarineed xubnaha kale ee kooxda BHD, waxaan ku siin karnaa adeeg hal-joog ah naqshadeynta caaryada iyo soo-saarista, naqshadeynta qalabka kormeerka iyo soo-saarista, cirbadeynta alaabada caagga ah, buufinta iyo isku-imaatinka.
Ku saabsan Enuo caaryada
Dongguan Enuo Mold Co., Ltd. waa kab hoosaad ka tirsan kooxda Hongkong BHD, qaabeynta caaryada caagga ah iyo soo saaristu waa ganacsigooda asaasiga ah. Intaas waxaa sii dheer, qalabka kormeerka R & D, cirbadeynta alaabada caagga ah, buufinta iyo isku imaatinka ayaa sidoo kale ku howlan.
Shirkadda ayaa ku guuleysatay dib u dejinta dhirta cusub bishii Abriil 2017, aag cusub oo baarkinno warshadeed ah oo gaaraya 3,000 oo mitir murabac, oo lagu buuxiyey saxnaan
Xarumaha makiinadaha CNC, mashiinka dhimirka ee EDM, mashiinada wax shiida, mashiinada wax shiida,tijaabinta iyo qalab kale oo gebi ahaanba ka badan 30 set, sidoo kale seddex koox oo isku dhafan oo isku dhafan ayaa lagu daray.
Waad ku mahadsan tahay dhammaan taageerada macaamiisha
Xarunta Enuo waxay gacan ka gaysataa guushaada!